Ihotele iBoutique Otomí kufuphi neTolantongo
Unyango olunobubele noluqhelekileyo. Ihanjelwe ngabanini bayo. Ihotele entsha enembono yeOtomí yemveli enamagumbi amahlanu angatshatanga kunye namagumbi amabini kufutshane neGrutas de Tolantongo kunye neLa Gloria Tolantongo. Iibhloko ezi-2 ukusuka kuMongameli kaMasipala waseCardonal, eHidalgo. Inkonzo yobuhlobo. Ihotele entsha enamagumbi ama-5 acocekileyo, igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo, iibhloko ezi-2 ukusuka edolophini yaseCardonal kwaye malunga nemizuzu engama-25 kude neGrutas de Tolantongo. Yentsapho kwaye iqhutywa. Sithetha isiOtomí, iSpanish, isiNgesi kunye nesiFrentshi.
Igumbi elilula, nje imizuzu engama-25 ukusuka eLas Grutas de Tolantongo naseLa Gloria Tolantongo. Ilungele iindwendwe ezi-2. Ngengqiqo yemveli ye-Otomí. Igumbi elicoceke kakhulu kwaye likhuselekile, igumbi linebhedi yobukhulu bokumkani kunye nembono yeOtomí yemveli. Imizuzu emi-2 ukuhamba ukuya edolophini eCardonal kwaye malunga ne-25 min ukuya eTolantongo.
Iibhloko ezi-2 nje ukusuka eLa Presidencia Municipal de Cardonal, yindawo ekhuselekileyo nengenangxolo. Ukuhamba ufika ngemizuzu emi-3 kwiZiko leCardonal.
Unyango olunobubele noluqhelekileyo. Awulondwendwe, ungumhlobo omtsha. Awulondwendwe olulula, ungumhlobo omtsha. thetha iSpanish, isiNgesi, kunye nesiFrentshi esincinci. Asinabunewunewu, kodwa siyibuyisela ngenkonzo enobubele.